कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ, सोच्नुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
“तिमीहरू पवित्र आचरण भएका र परमेश्वरप्रतिको भक्ति प्रकट हुने कामहरू गर्ने मानिस हुनुपर्छ।”—२ पत्रु. ३:११.
परमेश्वरको अनुमोदन पाउन हामी कस्तो किसिमको मानिस हुनुपर्छ?
सैतानले मानिसहरूलाई कसरी बहकाउँछ?
यहोवासितको आफ्नो सम्बन्ध जोगाउन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
१, २. परमेश्वरको अनुमोदन पाउन ‘हामी कस्तो किसिमको मानिस’ हुनुपर्छ?
प्रायजसो मानिस आफूबारे अरूले के सोचिरहेका छन्‌ भनेर चिन्ता गर्छन्‌। तर हामी ख्रीष्टियनहरू भने यहोवा परमेश्वर हामीबारे के सोच्नुहुन्छ, त्यसबारे अझ धेरै चासो राख्छौं। हुन पनि उहाँ ब्रह्माण्डकै सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ र “जीवनको मूल” उहाँसितै छ।—भज. ३६:९.
२ यहोवाको अनुमोदन पाउन हामी “पवित्र आचरण भएका र परमेश्वरप्रतिको भक्ति प्रकट हुने कामहरू गर्ने मानिस हुनुपर्छ” भनेर प्रेषित पत्रुसले बताए। (२ पत्रुस ३:११ पढ्नुहोस्) जीवनको हरेक पक्षमा स्वच्छ छौं भने मात्र हाम्रो “आचरण” पवित्र छ भन्न सक्छौं। हो, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो आचरण र हामीले गर्ने उपासना स्वच्छ हुनुपर्छ। साथै यहोवाप्रतिको गहिरो प्रेम र आदरले उत्प्रेरित भई “भक्ति प्रकट हुने कामहरू” गर्नुपर्छ। त्यसकारण परमेश्वरले हाम्रो आचरणलाई मात्र होइन, उहाँप्रतिको हाम्रो भावनालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। यहोवा “हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ।” त्यसैकारण हाम्रो आचरण पवित्र छ कि छैन र हामी उहाँको मात्र उपासना गर्छौं कि गर्दैनौं, उहाँलाई थाह छ।—१ इति. २९:१७.
३. हामीले आफैलाई कस्ता प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ?
३ सैतान हामीले परमेश्वरको अनुमोदन पाएको चाहँदैन। परमेश्वरसित हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न त्यसले सकेजति सब गर्छ। हामीले परमेश्वरको उपासना गर्न छोडोस् भनेर त्यसले झूटो बोलेर हामीलाई छल्छ। (यूह. ८:४४; २ कोरि. ११:१३-१५) त्यसकारण आफैलाई यसरी सोध्नुपर्छ: ‘सैतानले मानिसहरूलाई कसरी छल्छ? यहोवासितको सम्बन्ध जोगाउन म के गर्न सक्छु?’
सैतानले मानिसहरूलाई कसरी छल्छ?
४. परमेश्वरसितको हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न सैतानले केलाई निसाना बनाउँछ र किन?
४ चेला याकूबले लेखे: “हरेक मानिस आफ्नै तृष्णाद्वारा खिचिएर लोभमा फस्छ र परीक्षामा पर्छ। जब तृष्णा गर्भवती हुन्छ, तब त्यसले पापलाई जन्माउँछ; अनि पाप गरेपछि मृत्यु उत्पन्न हुन्छ।” (याकू. १:१४, १५) हृदयबाटै तृष्णा उत्पन्न हुने भएकोले परमेश्वरसितको हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न सैतानले हाम्रो हृदयलाई निसाना बनाउँछ।
५, ६. (क) हाम्रो हृदयलाई निसाना बनाउन सैतानले कुन माध्यम प्रयोग गर्छ? (ख) सैतानले हाम्रो हृदयमा गलत तृष्णा उब्जाउन कुन तीनवटा पासो प्रयोग गर्छ? ती पासो प्रयोग गर्न ऊ कत्तिको खप्पिस छ?
५ हाम्रो हृदयलाई निसाना बनाउन सैतानले कुन माध्यम प्रयोग गर्छ? बाइबल भन्छ: “सारा संसार त्यस दुष्टको हातमा परेको छ।” (१ यूह. ५:१९) सैतानको हतियारमा “संसारमा भएका थोकहरू” पर्छन्‌। (१ यूहन्ना २:१५, १६ पढ्नुहोस्) मानिसहरूलाई छल्न सैतानले यस संसारलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको हजारौं वर्ष भइसक्यो। यसै संसारमा बसेकोले हामीले आफूलाई सैतानका धूर्त चालहरूदेखि जोगाउनुपर्छ।—यूह. १७:१५.
६ सैतानले हाम्रो हृदयमा गलत तृष्णा अर्थात्‌ गलत इच्छा उब्जाउन खोज्छ। यसो गर्न त्यसले प्रयोग गर्ने तीनवटा पासोबारे प्रेषित यूहन्नाले बताए। ती हुन्‌: (१) “शरीरको अभिलाषा,” (२) “आँखाको अभिलाषा” र (३) “तडकभडक।” येशूलाई उजाडस्थानमा प्रलोभनमा पार्दा पनि सैतानले यी तीनवटै पासो प्रयोग गऱ्यो। सैतानले यी पासो थाप्न थालेको वर्षौं भइसकेकोले कसलाई कुन पासो थाप्नुपर्छ, त्यसलाई राम्ररी थाह छ। सैतानका पासोहरूबाट आफूलाई कसरी जोगाउन सक्छौं भनेर छलफल गर्नुअघि त्यसले हव्वालाई बहकाउन सक्नु तर परमेश्वरका छोरालाई भने बहकाउन नसक्नुको कारण बुझौं।
हव्वालाई बहकाउन सैतानले “शरीरको अभिलाषा” प्रयोग गऱ्यो (अनुच्छेद ७ हेर्नुहोस्)
७. हव्वालाई लोभ्याउन सैतानले कसरी “शरीरको अभिलाषा” प्रयोग गऱ्यो?
७ बाँच्नको लागि हामी सबैलाई खानेकुरा चाहिन्छ। हुन पनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई प्रशस्त अन्न उब्जाउने क्षमतासहित सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर खानेकुराप्रतिको स्वाभाविक चाहनालाई प्रयोग गरेर सैतानले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा विपरीत चलाउन खोज्छ। हव्वाको सन्दर्भमा त्यसले के गऱ्यो, विचार गरौं। (उत्पत्ति ३:१-६ पढ्नुहोस्) सैतानले हव्वालाई “असल र खराबको ज्ञान दिने रूख”-को फल खाए पनि तिनी मर्दिनन्‌, बरु परमेश्वरजस्तै हुनेछिन्‌ भन्यो। (उत्प. २:९) जीवित रहन हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ भन्ने छैन भनेर सैतानले भन्न खोज्दै थियो। कस्तो सरासर झूट बोल्न सकेको! त्यसले हव्वाको मनमा यस्तो झूट राखिदिएपछि हव्वासामु दुईवटा छनौट थियो: त्यस झूटलाई तिरस्कार गर्ने कि त्यसबारे सोचिरहेर फल खाने इच्छालाई बढ्न दिने। हव्वाले बाँकी जुनसुकै रूखको फल खान सक्थिन्‌ तर तिनले बगैंचाको बीचमा भएको रूखबारे सोचिरहिन्‌। अनि अन्तमा तिनले त्यस रूखको फल टिपेर खाइन्‌। यसरी हव्वाको मनमा परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको कुरा हासिल गर्ने तृष्णा जगाउन सैतान सफल भयो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, येशूले कहिल्यै बिर्सनुभएन (अनुच्छेद ८ हेर्नुहोस्)
८. येशूलाई प्रलोभनमा पार्न सैतानले कसरी “शरीरको अभिलाषा” प्रयोग गऱ्यो? तर सैतान किन सफल भएन?
८ सैतानले येशूलाई पनि यही पासोमा पार्न खोज्यो। येशू ४० दिन ४० रात उजाडस्थानमा केही नखाई बस्नुभएको थियो। त्यसैकारण सैतानले येशूलाई खानेकुराको प्रलोभन देखाउन खोज्यो। सैतानले यसो भन्यो: “यदि तपाईं परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भने यो ढुङ्गा रोटी भइजाओस् भन्नुहोस्।” (लूका ४:१-३) येशूसामु दुईवटा छनौट थियो: आफ्नो भोक मेट्न आफूसित भएको शक्ति प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। यो शक्ति आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर येशूलाई थाह थियो। भोक लागेको भए तापनि भोक मेटाउनुलाई भन्दा परमेश्वरसितको आफ्नो सम्बन्धलाई उहाँले महत्त्वपूर्ण ठान्नुभयो। त्यसैकारण येशूले यस्तो जवाफ दिनुभयो: “यस्तो लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीको भरमा मात्र बाँच्नुहुँदैन तर यहोवाको मुखबाट निस्कने प्रत्येक वचनको भरमा बाँच्नुपर्छ।’”—मत्ती ४:४; लूका ४:४.
९. “आँखाको अभिलाषा”-को अर्थ के हो? सैतानले हव्वालाई त्यस पासोमा कसरी पाऱ्यो?
९ सैतानले प्रयोग गर्ने अर्को पासो “आँखाको अभिलाषा” हो भनेर प्रेषित यूहन्नाले बताए। आँखाको अभिलाषाको अर्थ कुनै कुरालाई हेरिरहेर त्यो पाउने तृष्णा बढ्न दिनु हो। हव्वालाई बहकाउन सैतानले यही पासो प्रयोग गऱ्यो। त्यसले भन्यो: “तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन्‌।” हव्वाले जति-जति त्यो फल हेरिन्‌, त्यो खाने तृष्णा पनि उति-उति नै बढ्न थाल्यो। हव्वालाई त्यो रूख “हेर्नमा रहरलाग्दो” लाग्न थाल्यो।
१०. येशूलाई प्रलोभनमा पार्न सैतानले “आँखाको अभिलाषा” कसरी प्रयोग गऱ्यो? येशूले कस्तो जवाफ दिनुभयो?
१० येशूलाई प्रलोभनमा पार्न सैतानले “आँखाको अभिलाषा” कसरी प्रयोग गऱ्यो? सैतानले येशूलाई “छिनभरमै संसारका सबै राज्य देखायो र उहाँलाई भन्यो: ‘म यी सबै राज्यको अख्तियार अनि त्यसको गौरव तपाईंलाई दिनेछु।’” (लूका ४:५, ६) त्यतिखेर येशूले छिनभरमै संसारका सबै राज्य देख्नुभएको थिएन; बरु ती राज्यको गौरवको दर्शन देख्नुभएको थियो। सैतानले येशू आफूले देखेको कुराले गर्दा प्रलोभनमा पर्नुहुन्छ भन्ठानेको हुनुपर्छ। लाजै पचाएर त्यसले उहाँलाई भन्यो: “तपाईंले मेरै सामने मलाई दण्डवत्‌ गर्नुभयो भने यी सबै तपाईंका हुनेछन्‌।” (लूका ४:७) येशू सैतानको कठपुतली बन्न चाहनुभएन। त्यसैकारण उहाँले तुरुन्तै यस्तो जवाफ दिनुभयो: “यस्तो लेखिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ अनि उहाँलाई मात्र पवित्र सेवा चढाउनुपर्छ।’”—लूका ४:८.
११. सैतानले हव्वालाई कसरी बहकायो?
११ अन्तमा यूहन्ना “तडकभडक”-बारे उल्लेख गर्छन्‌। पृथ्वीमा आदम र हव्वा मात्र भएकोले तिनीहरूले अरूसामु तडकभडक गर्ने त कुरै भएन, तर तिनीहरू घमन्डी भने भए। परमेश्वरले तिनलाई केही कुराबाट वञ्चित गराइरहनुभएको छ भन्ने भान सैतानले हव्वालाई पाऱ्यो। “असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल” खाएमा हव्वा पनि “असल र खराबको ज्ञान पाएर . . . परमेश्वरजस्तै” हुनेछिन्‌ भन्यो। (उत्प. २:१७; ३:५) यहोवाविना पनि जीवन चल्छ भनेर हव्वाले सोचेको सैतान चाहन्थ्यो। हव्वाले यो झूट पत्याइहाल्नुको एउटा कारण घमन्ड हुन सक्छ। फल खाए पनि मरिंदैन भन्ठान्दै तिनले निषेध गरिएको फल खाइन्‌। तर तिनी शतप्रतिशत गलत थिइन्‌।
१२. सैतानले येशूलाई कुन प्रलोभनमा पनि पार्न खोज्यो? तर येशूले जवाफमा के भन्नुभयो?
१२ हव्वाले जस्तो नभई येशूले भने नम्रताको उदाहरण बसाल्नुभयो। सैतानले येशूलाई मानिसको वाहवाही पाउने तर परमेश्वरको परीक्षा हुने प्रलोभनमा पनि पार्न खोज्यो। त्यसो गर्नु घमन्डी हुनु बराबर भएकोले येशूले सैतानको प्रलोभनलाई ठाडै इन्कार गर्नुभयो। उहाँले स्पष्टसँग र सीधै यसो भन्नुभयो: “यस्तो भनिएको छ, ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरको परीक्षा लिनुहुँदैन।’”—लूका ४:९-१२ पढ्नुहोस्।
यहोवासितको हाम्रो सम्बन्ध कसरी जोगाउन सक्छौं?
१३, १४. आज सैतानले हामीलाई कसरी बहकाउन खोज्छ?
१३ हव्वा र येशूमाथि प्रयोग गरेकै पासो सैतानले आज पनि प्रयोग गर्छ। मानिसहरूलाई अनैतिक काम गर्ने वा धेरै खानपिन गर्ने प्रलोभनमा पार्न त्यसले “शरीरको अभिलाषा” प्रयोग गर्छ। अश्‍लील सामग्री, त्यसमा पनि विशेषगरि इन्टरनेटमा पाइने अश्‍लील सामग्री हेर्ने प्रलोभनमा पार्न त्यसले “आँखाको अभिलाषा” प्रयोग गर्छ। अनि मानिसहरूलाई घमन्डी बनाउन र शक्ति, प्रसिद्धि र धेरैभन्दा धेरै भौतिक कुरा प्राप्त गर्ने प्रलोभनमा पार्न त्यसले “तडकभडक” प्रयोग गर्छ।
यी अवस्थाहरूमा तपाईंलाई बाइबलका कुन-कुन सिद्धान्तले मदत गर्छ? (अनुच्छेद १३, १४ हेर्नुहोस्)
१४ “संसारमा भएका थोकहरू” माछा मार्न बल्छीमा हालिने चाराजस्तै हुन्‌। बल्छीको चारा आकर्षक देखिन्छ तर त्यसमा अङ्कुश पनि हुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको नियमविपरीत काम गर्न लगाउन सैतानले सामान्य र आवश्यकजस्तो देखिने कुराहरूलाई बल्छीजस्तै प्रयोग गर्छ। आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु र जीवन आरामदायी बनाउनु परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले सोचेको सैतान चाहन्छ। के तपाईं सैतानको बहकाउमा पर्नुहुनेछ?
१५. सैतानका प्रलोभनहरू तिरस्कार गर्ने सन्दर्भमा हामी कसरी येशूको अनुकरण गर्न सक्छौं?
१५ हव्वा सैतानको बहकाउमा परिन्‌ तर येशू पर्नुभएन। प्रत्येक पटक येशूले “यस्तो लेखिएको छ” वा “यस्तो भनिएको छ” भन्दै शास्त्रमा आधारित जवाफ दिनुभयो। बाइबलका असल विद्यार्थी हौं भने हामीलाई बाइबलमा लेखिएका कुराहरू राम्ररी थाह हुन्छ र प्रलोभनमा पर्दा सही निर्णय गर्न मदत गर्ने पदहरू सम्झन सक्नेछौं। (भज. १:१, २) परमेश्वरका वफादार सेवकहरूको उदाहरण सम्झँदा उनीहरूजस्तै वफादार हुने मदत पाउँछौं। (रोमी १५:४) यहोवाको गहिरो आदर गर्दा अर्थात्‌ उहाँले प्रेम गर्ने कुरालाई प्रेम गर्दा र उहाँले घृणा गर्ने कुरालाई घृणा गर्दा हामी सुरक्षित हुनेछौं।—भज. ९७:१०.
१६, १७. हामी कस्तो किसिमको मानिस हौं भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो “सोचविचार गर्ने क्षमता”-ले कसरी असर गर्छ?
१६ संसारको जस्तो नभई यहोवाको जस्तो सोचाइ राख्ने व्यक्ति हुन प्रेषित पावल हामीलाई “सोचविचार गर्ने क्षमता” चलाउने प्रोत्साहन दिन्छन्‌। (रोमी १२:१, २) हामीले आफ्नो सोचाइलाई हरबखत नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भनेर जोड दिंदै पावल यसो भन्छन्‌: “परमेश्वरको ज्ञानविरुद्ध उठाइने तर्कवितर्क र हरेक विघ्नबाधालाई हामी उखेल्दैछौं; अनि हरेक विचारलाई कैद गरेर त्यसलाई ख्रीष्टको आज्ञाकारी बनाइरहेका छौं।” (२ कोरि. १०:५) हाम्रो सोचाइले हामी कस्तो किसिमको मानिस हौं, त्यसमा फरक पार्ने भएकोले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने कुराहरूबारे मात्र सोचविचार गरिरहनुपर्छ।—फिलि. ४:८.
१७ पवित्र हुन चाहन्छौं भने गलत सोचाइ र खराब इच्छालाई तिरस्कार गर्नै पर्छ। यहोवालाई “शुद्ध मन”-ले माया गर्नै पर्छ। (१ तिमो. १:५) तर एक त हाम्रो हृदय नै छली छ अनि अर्को “संसारमा भएका थोकहरू”-ले हामीलाई कत्ति प्रभाव पार्छ, यादै नगरेका हुन सक्छौं। (यर्मि. १७:९) त्यसैकारण पावलले दिएको यो सल्लाह पालन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ: “तिमीहरू विश्वासमा छौ कि छैनौ भनी जाँचिरहो, तिमीहरू कस्ता मानिसहरू हौ साबित गरिरहो।” बाइबलको अध्ययन गर्दा आफैलाई यसरी सोध्नुपर्छ: ‘म जे सोच्छु र जुन कुराको तृष्णा गर्छु, त्यसले यहोवालाई खुसी पार्छ?’—२ कोरि. १३:५.
१८, १९. हामी प्रत्येकले किन यहोवाले चाहेको जस्तो मानिस भइरहने प्रयास गर्नुपर्छ?
१८ यूहन्नाका यी शब्दहरू सम्झँदा पनि “संसारमा भएका थोकहरूलाई” तिरस्कार गर्ने मदत पाउँछौं: “संसार बितेर जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि, तर जसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ, ऊ सधैंभरि रहिरहन्छ।” (१ यूह. २:१७) सैतानको संसार सधैंभरि रहन्छ जस्तो देखिएला। तर एक दिन त्यो अवश्य नाश हुनेछ। संसारमा भएका कुनै पनि कुरा स्थायी छैन भन्ने तथ्यलाई सम्झ्यौं भने सैतानले हामीलाई बहकाउन सक्नेछैन।
१९ यहोवाको दिनमा “आकाश आगलागी भएर पग्लनेछ अनि तत्त्वहरूचाहिं प्रचण्ड तापले गर्दा गल्नेछ।” त्यस दिनको “उपस्थितिलाई सधैं सम्झँदै प्रतीक्षा” गर्दा हामी परमेश्वरको अनुमोदन पाउने किसिमको मानिस हुनुपर्छ भनेर प्रेषित पत्रुसले लेखे। (२ पत्रु. ३:१२) त्यो दिन छिट्टै आउँदैछ! यहोवाले सैतानको संसारको नामोनिसान मेटाउनुहुनेछ। त्यतिन्जेल सैतानले हामीलाई पनि हव्वा र येशूलाई जस्तै “संसारमा भएका थोकहरू” प्रयोग गरेर बहकाउने प्रयास गरिरहनेछ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हव्वाजस्तो नहोऔं! हव्वाजस्तै भयौं भने सैतानलाई आफ्नो ईश्वर तुल्याइरहेका हुनेछौं। सैतानका प्रलोभनहरू जत्तिसुकै आकर्षक देखिए तापनि ती प्रलोभनलाई येशूले जस्तै तिरस्कार गरौं! आउनुहोस्, यहोवाले चाहेको जस्तो मानिस हुने अथक प्रयास गरिरहौं!